Mihorohoro Anjozorobe sy ny manodidina
Tao anatin’ny volana maromaro izao dia miaina anatin’ny tebiteby sy ny horohoro tanteraka ny mponina ao an-tampon-tanànan’Anjozorobe sy ny manodidina.Araka ny vaovao voarainay avy tany an-toerana dia misy mangalatra olona any amin’io tanàna io.
Raha ny fitantaran’ity lehilahy ity ihany dia olona mitondra fiara 4X4 fotsy lehibe izany no manenjika izay olona sendra mandeha amin’ny lalana mangina izay efa iandrasan’izy ireo kendry tohana izay mpandalo mandeha irery na ankizy na vehivavy.Raha ny nambaran’ity lehilahy ity taminay ihany dia anisan’ireo olona efa nohenjehin’ireo mpangalatr’olona ny tenany kanefa dia afaka nitsoaka nanavotr’aina tany anaty lohasaha tany. Lehilahy matanjaka no voalazany fa nanenjika azy tamin’izany ary mbola nisy lehilahy niandry ihany koa tao anaty fiara. Tsy fantatra aloha izay tena anaovany ireo olona azony fa dia efa nisy ny olona nanjavona teny an-tanàna.
Vokatr’izany toe-javatra any Anjozorobe sy ny manoddidinaa izany, dia tsy mety miasa any an-tsaha sy mantsaka rano any an-dohasaha intsony ny vehivavy sy ny ankizy ka lasa ny lehilahy avokoa no manao izany asa izany. Manoloana izany zava-misy izany, dia manaitra ny tompon’andraikitra any an-toerana sy ny manam-pahefana ny mponinaa mba hijery akaiky sady haingana ny toe-draharaha any amin’io toerana io fa mijaly ny mponina, indrindra fa ny zaza amam-behivavy.